qarax – Janaay Media
09:25: PM Tuesday August 20, 2019
Deg-Deg: Qarax Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Posted by Abdikadar Hassan - March 27, 2019
Qarax xooganaa oo inta badan laga maqlay Xaafadaha magaaladda Muqdisho ayaa goordhaweyd ka dhacay Magaaladda. Sida ay Jinaay Media u xaqiijiyeen goobjoogayaal qaraxaan ayaa ka dhacay agagaarka Cali Kamiin Degmadda Wartanabadda ee Gobolka Banaadir. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay Kolonyo halkaas maraysay,lama ogaanin waxa ay ahaayeen. Khasaaraha soo baxaya ayaa sheegaya
Qarax sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka ka dhacay Muqdisho
Posted by Abdikadar Hassan - March 25, 2019
Qarax xooggan ayaa saaka ka dhacay inta u dhexeysa Isgoyska Al-Baraka iyo xaafada MBC, kaasoo ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah. Qaraxa oo ahaa miino ayaa lagu xiray gaari marayay meel ku dhow Isgoyska Al-Baraka, waxaana ku dhintay Darawalkii gaariga waday, halka ay dhaawacyo ka soo gaareen Saddex ruux oo la sheegay inay ka
Wasiir kuxigeenkii Wasaarada Shaqada iyo Shaqaalaha oo lagu Dilay Qaraxyadii saaka ka dhacay Muqdisho
Posted by Abdikadar Hassan - March 23, 2019
Wasiir ku-xigeenkii Wasaaradda shaqada iyo Shaqaalaha Saqar Ibraahim Cabdalla ayaa ku geeriyooday qaraxyadii lagu weeraray Xarunta wasaaradda. Saqar ayaa sidoo kale ahaa Xildhibaan ka Tirsan baarlamaanka Soomaaliya,waxaana la sheegay inuu kamid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxa dhismaha Wasaaradda. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa, islamarkaana dabley ka tirsan ay gudaha ugu jiraan dhismaha wasaaradda. Dhanka kale
3 askari ayaa ku dhimatay Qarax miino oo ka dhacay Muqdisho
Ugu yaraan 3 Askari oo Milateri ah ayaa ku dhintay tiro kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii gaari ay saarnaayeen uu haleelay qarax miino oo dhulka la geliyay. Qaraxa ayaa ka dhacay jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka xarunta Efeeko waxaana la sheegaya in qaraxa kadib ay Ciidamada ridayn rasaas badan sida
Qarax lala beegsadey Suuqa Degmada Qasaxdheere ee Gobolka Bay
Posted by Abdikadar Hassan - March 22, 2019
Wararka naga soo gaaraaya Magaalada Qasaxdheere oo ka tirsan Gobolka Bay ee Maamul Goboleedka Koonfurgalbeed ayaa wuxuu sheegayaa in Suuqa Deqmada Qasaxdheere lagu qarxiyey waxyaabaha qarxa maata saacadu markey ahayd 12.30 ee duhurnimo, kaasoo suuqa la dhigey inta aan Suuqu furmin. Qaraxaas oo ay ku dhinteen Hal Askari oo ka tirsan Ciidamada Dowladda, Halka tobaneeyo
Qarax lala beegsaday ciidamo Itoobiyaan ah oo sababay Khasaaro
Posted by Abdikadar Hassan - February 20, 2019
Kolonyo ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa saakay waxaa qarax lagula eegteen degmada Baardheere ee Gobalka Gedo. Qaraxa ayaa waxaa la sheegay in Ciidamada Itoobiya lagula beegsaday gudaha Degmada Baardheere, xilli ay socdaal ku marayeen degmadaasi. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Baardheere ayaa Jinaay Media u sheegay in dhimasho iyo dhaawac uu ka
Hal quurx ayaa ku geeriyooday qarax gaari lagu xiray oo ka dhacay Muqdisho
Posted by Abdikadar Hassan - February 13, 2019
Inta la xaqijiyay hal ruux oo ahaa wadihii gaariga ayaa ku dhintay kadib qarax lagu xiray gaari oo ka dhacay laami yaraha degamada Wadaijr gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano laami yaraha Zoobe ee Magaalada Muqdisho. Gaarigaan oo ah nooca xabadda aysan karin, ayaa wararka waxa ay sheegayaan inuu leeyahay mid ka mid ah masuuliyiinta
Qarax sababay khasaaro oo saakay ka dhacay magaaladda Muqdisho
Posted by Abdikadar Hassan - February 12, 2019
Inta la xaqiijiyay askari ka Tirsnaa Ciidamadda Booliska Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhintay kadib qarax lagu xiray gaari uu watay. Qaraxaan ayaa ka dhacay Xaafadda Seybiyaano Degmadda Hodan ee Gobolka Banaadir. Gaariga qaraxa lagu xiray ayaa ahaa Noocda Soomaalida u taqaano Crip waxaana saarnaa askariga oo kaliyah,wuxuuna qarxay xili uu ku dhawaa beerta Qaadka Lagu
Posted by Abdikadar Hassan - January 29, 2019
Qarax xoogan Ayaa goordhow Ka dhacay tallada Daljirka Dahsoon, qaraxani ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa. Ma jiro wax faahfaahin ah oo ka soo baxay qaraxa iyo dhibaatada uu geystay. Hase ahaate qaraxa ayaa si weyn looga maqlay meela badan oo kamida magaalada Muqdisho Lasoco wixii warar ah ee kasoo kordha